Soo dejisan Vegas Pro 17 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahintaVegas Pro
Bogga rasmiga ah: Vegas Pro
Wikipedia: Vegas Pro
Vegas Pro – a video editor awood badan iyo shaqayso taageerada ay u hayaan teknoolojiga sare ah. Software wuxuu taageeraa sawiro 2D ama 3D iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan video clips xirfadeed ama filimo HD la ballaarinta weyn. Waxaa ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee Vegas mid Pro ogow kartaa: Waxaa intaa dheer faraha badnaa ee saamaynta gaar ah, oo la shaqeeya kormeerayaasha badan, taageero ah qoraallada, panning, dhawaajin raacidda iwm software waxa kale oo uu awood u siisaa si ay u qoraan mashruuca abuuray on DVD Blu-ray ama ama la geliyo videos si YouTube.
Support for teknoolojiga sare ah
Support for tiro badan oo qaabab warbaahinta
La shaqaynta sawiro 3D
Soo dejisan Vegas Pro
Faallo ku saabsan Vegas Pro
Vegas Pro Xirfadaha la xiriira
Software in la siiyo xuquuqda Root in qalabka Android. Sidoo kale waxa ay taageertaa update ee wadayaasha iyo hoos u Xamuulka ah oo ku saabsan qaybaha kala duwan ee qalabka.
Avast Premier – fayras leh qalab fara badan oo loogu talagalay ilaalinta kombiyuutarkaaga oo dhameystiran khatarta gudaha iyo dibedda ee noocyada kala duwan.
Legacy – softiweer lagu abuuro laguna maareeyo geedka qoyska. Software-ka wuxuu taageerayaa abuuritaanka jaantusyo qoys oo qaabab kala duwan ah iyo raadinta macluumaadka ku saabsan awoowayaasha xog-ururinta dadweynaha.